Cotton & dhar spandex
dhar dhar Home
Jeebadda & dahaarka dhar
Polyester nylon dhar
TR dhar isku joog
Dun dhar cas
Shijiazhuang PengTong IMP. & EXP. Co., Ltd. ---- waa-saarka shisheeye & ganacsiga ganacsi oo dhamaystiran. Been shirkadda ee Shijiazhuang of Hebei saldhigga dharka qaranka, taas oo ah mid ka mid ah saldhigyada dharka ugu weyn ee Shiinaha. Waxaa jira mashiinka 400 jare iyo dyeing joogto ah & Mashiinka daabacan ee shirkadda. Waxaan u tidicdo karaa in ka badan 100 million mitir ingrey alaabta iyo dyeing ka badan 200 oo milyan oo dhar sanad kasta.
Waxaana lagu siinayaa kala duwan ee wax soo saarka si ay u daboolaan baahida macaamiisha wakhtigaas. Our wax soo saarka ugu weyn waxaa Jeebadda ----- suuf, T / C, T / R, waxaa jira Caraabaah, twill, herringbone. Waxay waxaa lagu gadaa suuqyada maxalliga ah iyo dhoofiyay in ka badan labaatan dal iyo meelaha ay ka mid US, Hijmans, Southeast Asia, Bariga Dhexe iyo Yurub.
Waxaan had iyo jeer soo bixin fikrado saldhig cusub oo ku saabsan tayada wanaagsan iyo sumcad wanaagsan ka macaamiisha.
Waxaan mar walba ku adkaystaan ​​doonaa siyaasadda ee "Best Quality, Xushmad Credit, Service Naseexayn iyo idinkoo Cooperation" si ay u bixiyaan adeeg-fasalka koowaad ee macaamiisha oo dhan. Dhanka kale, waxaan sii wadi doonaa in la xoojiyo kartida our suuqyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah oo ku saleysan waxyaabaha hagaagay tayada iyo adeegga.
PengTong ayaa indhaha ku wada horumarinta kula mustaqbalka.
Waxaan dajisay hab qumman maamulka iyo socodka saarka, waaxda horumarinta, kaaliyaha waaxda, waaxda QC, waaxda maaliyadda.
macaamiisha joogtada ah, H & M FMU Zara ELAND Laawi EE AASAASIGA GOLAHA Tommy
Warshadaha iyo ganacsiga isdhexgalka
Waxaan leenahay warshad gaar ah, sidaas darteed waxaan u yarayn karaa kharashka iyo soo laaban faa'iidada macaamiisha dib, in waqtigaas, waxaa aan ku siin kara adeegyada xirfadeed.
adeeg-iibka ka dib
Haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo tayo leh ka dib markii saleing, waxaan kuu diyaarin doonaa qof gaar ah si ay caawimaad qarka dhibaatada sida ugu dhaqsaha badan
ilaalinta xoog wax soo saarka
Waxaan leenahay oo dhan cayn kasta oo yari Slaam 400 nooc, soosaarka karo 14 million mitir dhar sannad kasta
By goobaha dekedda Tianjin iyo dekedda Qingdao, waxaan ku siin karaa adeeg ah "The time bixinta ugu dhaqsiyaha badan, bixinta ugu horeysay".
Ku dar: dhexena # 1201, Ximeiwuzhou Plaza, Huaian East Road, Degmada Yuhua, Shijiazhuang, Hebei, Shiinaha
Tc 65/35 32*32 106*58 Plain Fabric, TC dun la caseeyey Fabric, 100 Cotton Yarn Dyed Chambray Fabric, 100 Cotton Yarn Dyed Woven Fabric, Yarn Dyed Brushed Fabric, Yarn Dyed Check Fabrics,